Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 07/06/2020)
Nke ebe mma na-enwe Pizza karịa mba nke na mepụtara ya, nri? Ịtali ịhụnanya, n'anya, a n'anya na-atọ ụtọ nri-tụgharịa-nri! Sịkwa pizzas na Italy na- ghọọ a dị ọcha ụdị art, na emesịwo UNESCO nwapụtara!
Ndepụta anyị ga-enye gị n'elu-notch ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke Rome, Milan, Florence, Naples, na Verona. Ebe a na-n'elu 8 pizzas na Italy.
Mgbe a na ghota nke Pizzas Na Italy, ị nwere ike akụkụ na nlele nke "Tre Colori Pizza." atọ dị iche iche na-atọkwa ụtọ Efrata-eme ka a red, acha ọcha na green Pizza, dị ka Italian ọkọlọtọ. Gbalịa ka ị ghara ka jalapeno-ede ede, oseose Sicilian soseji, na tangy ọcha cheese ọkụ n'ọnụ gị. Ọ bụrụ na ị rụọ dum Pizza na 10 nkeji ma ọ bụ obere i nweta a na-agbata n'ọsọ. Tụkwasị na nke a na-achị, ị nwekwara ike na-aṅụ ihe karịrị 16 ounce nke mmiri ma ọ bụ biya. The eto eto na-akawanye ya nri free, a t-uwe elu na a foto posted na mgbidi ama. na, ihe na-eme ma ọ bụrụ na ị na-adịghị eme ka ọ? Ị nwere ike mgbe niile na-agbalị ọzọ, ka na-echeta nke a mgbe ị na- njem ka Rome.
Il Trapizzino bụ ezigbo anya maka ihe ọ bụla Pizza n'anya. N'igosi ọdịiche ndị ọzọ pizzas na Italy, pizzas ebe a anya ọzọ dị ka zita sandwiches. Ụfọdụ na-akpọ ha stuffed pizzas. Inside ndị a stuffed triangles i nwere ike ịhụ Efrata ka steamed chicken, eggplant na red octopus. Mgwakota agwa bụ nnọọ ìhè, nke-enye gị na-eri abụọ ma ọ bụ atọ iberibe. Nke a obere, mma ebe na obi nke Testaccio na-mgbe na-juru n'ọnụ na ndị mmadụ. N'ihi ya, i mma ka a ndoputa dịkarịa ala awa ole na ole tupu.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ(www.saveatrain.com) a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/top-8-pizzas-italy/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / ya / tr ma ọ bụ / fr na ndị ọzọ asụsụ.